အောင်လအန်ဆန် (Aung La N Sang) ဘာကြောင့် အနိုင်ရခဲ့တာလဲ
4 Nov 2017 . 1:22 AM
အောင်လအန်ဆန် (Aung La N Seng) ဘာကြောင့် အနိုင်ရခဲ့တာလဲ
မြန်မာ့စပါးအုံးမြွေ (Burmese Python) လို့ တင်စားကြတဲ့ အောင်လအန်ဆန် (Aung La N Sang) ဟာ အလိန်းဂါလာနီ (Alain Ngalani) နဲ့ ပထမအချီ ၄မိနစ်၃၁စက္ကန့်မှာပဲ လည်ပင်းချုပ်ကွက်နဲ့ အနိုင်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကချင်တိုင်းရင်းသား အောင်လအန်ဆန်ကို အားပေးနေတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညဟာ ပျော်စရာအတိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ပုံမှန်အခြေအနေမှာ (၁၈၅) ပေါင်သာရှိတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ဟာ ဒီပွဲမှာ ဝိတ်တင်ပြီး ပေါင် (၂ဝဝ) ဝန်းကျင်နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့သလို ၂၂၉ ပေါင် (၁ဝ၃.၈၇ ကီလိုဂရမ်) ရှိတဲ့ အလိန်းဂါလာနီကလည်း ဝိတ်အနည်းငယ်လျော့ပြီး ရင်ဆိုင်ခဲ့တာပါ။
အလိန်းဂါလာနီဟာ ကစ်ဘောင်ဆင်ပွဲပေါင်း (၃၅) ပွဲထိ ကစားခဲ့ပြီး (၂၅) ပွဲအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေကို ကစ်ဘောင်ဆင်လောကမှာပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့သူပါ။ အဲဒီနောက်မှာ မွေထိုင်းပွဲတွေ ထိုးသတ်ခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၃ခုနှစ်ရောက်မှ MMA လောကထဲ ဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး ကစ်ဘောင်ဆင်နဲ့ မွေထိုင်းလို Stand Fight တွေကိုသာ ကစားဖူးတဲ့ အလိန်းဂါလာနီဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ အပူးအချုပ်ကို အဓိကထားရတဲ့ Ground Fight ကိုတော့ အားနည်းမှာပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့်လည်း အောင်လအန်ဆန်ဟာ ခွန်အားဗလကြီးမားပြီး Stand Fight ကောင်းတဲ့ အလိန်းဂါလာနီကို အပူးအချုပ်တွေနဲ့သာ ကစားခဲ့ပါတယ်။
Stand Fight ကောင်းတဲ့ အလိန်းဂါလာနီ (Alain Ngalani)
အောင်လအန်ဆန်ဟာ အမိမြေမှာ ဝိတ်တန်းမတူတဲ့ပြိုင်ဘက်နဲ့ ထိုးသတ်ရမှာဖြစ်တဲ့ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာမှန်း သိသာခဲ့ပါတယ်။ ပွဲစပြီး ၁မိနစ်လောက်မှာ အလိန်းဂါလာနီဟာ အားသုံးပြီး အပေါ်ကနေ အပိုင်အနိုင်ထိုးသတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် အောင်လအန်ဆန်ဟာ သူကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘရာဇီးဂျူဂျစ်ဆုနည်းကို အကောင်းဆုံးအသုံးချသွားတာပါ။ ဒီအချိန်မှာ အပေါ်ကဖြစ်တဲ့ အလိန်းဂါလာနီဟာ အောက်ကကျနေတဲ့ အောင်လအန်ဆန်ကို ဘာကြောင့်အလဲမထိုးနိုင်ရတာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယ်။ အားကစားမှာ လူကောင်ကြီးတိုင်း အနိုင်ယူရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူကောင်သေးပေမယ့် ပွဲအတွေ့အကြုံ၊ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ နည်းစနစ်ပေါင်းစပ်လိုက်ရင် “ကြွေတစ်လှည့် ကြက်တစ်ခုန်” ပါပဲ။
အောင်လအန်ဆန်ဟာ အရပ်အမြင့် ၁၈၅ စင်တီမီတာ (၆ပေ ၁လက်မ) ရှိပါတယ်။ အလိန်းဂါလာနီကတော့ ၁၈ဝ စင်တီမီတာ (၅ပေ ၁ဝလက်မ) သာရှိပါတယ်။ နှစ်ဦးချင်းရင်ဆိုင်ထိုးတဲ့အချိန်မှာ အလိန်းဂါလာနီရဲ့မေးဟာ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ပုခုံးလောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ (ဒီအနေအထားမှာ အောင်လအန်ဆန်ဟာ အနည်းငယ်ယိုင်နေတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။) အောင်လအန်ဆန်ဟာ လည်ပင်းကို သေချာချုပ်ပြီးတာနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို လျောချလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါကို အားကစားမှာ Guillotine Choke လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အလိန်းဂါလာနီတစ်ယောက် ဘာမှမတက်နိုင်ဘဲနဲ့ အသက်ရှုကြပ်သွားပြီး အရှုံးပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ (၁) မိနစ်လောက်ကြာသွားမယ်ဆိုရင် အလိန်းဂါလာနီ သေဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။
Guillotine Choke ပွဲသိမ်းတိုက်ကွက်
ပထမအချီမပြီးသေးခင်မှာပဲ ပွဲအဖြေပေါ်သွားတဲ့အတွက် အောင်လအန်ဆန်ပွဲကို စောင့်မျှော်အားပေးရတဲ့ မြန်မာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ မချင့်မရဲဖြစ်ကြပေမယ့် ကိုယ့်လူမျိုးအနိုင်ရတဲ့အတွက် ဖြေသာနိုင်ပါတယ်။ အားကစားပွဲတွေမှာ ကိုယ့်ဘက်က အချိန်အကြာကြီး ကြည့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပေမယ့် အခုလို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ပွဲတွေကလည်း အများကြီးပါ။ အောင်လန်အန်ဆန်း အနိုင်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကတော့ ပြိုင်ဘက်အားနည်းချက်ကို အသုံးချနိုင်မှု၊ ပါးနပ်မှုတွေနဲ့ မြန်မာပရိသတ်အားတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံမူရင်း – One Championship
အောငျလအနျဆနျ (Aung La N Sang) ဘာကွောငျ့ အနိုငျရခဲ့တာလဲ
မွနျမာ့စပါးအုံးမွှေ (Burmese Python) လို့ တငျစားကွတဲ့ အောငျလအနျဆနျ (Aung La N Sang) ဟာ အလိနျးဂါလာနီ (Alain Ngalani) နဲ့ ပထမအခြီ ၄မိနဈ၃၁စက်ကနျ့မှာပဲ လညျပငျးခြုပျကှကျနဲ့ အနိုငျယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကခငျြတိုငျးရငျးသား အောငျလအနျဆနျကို အားပေးနတေဲ့ မွနျမာပရိသတျတှအေနနေဲ့ တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့ညဟာ ပြျောစရာအတိဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ပုံမှနျအခွအေနမှော (၁၈၅) ပေါငျသာရှိတဲ့ အောငျလအနျဆနျဟာ ဒီပှဲမှာ ဝိတျတငျပွီး ပေါငျ (၂ဝဝ) ဝနျးကငျြနဲ့ ပှဲထှကျလာခဲ့သလို ၂၂၉ ပေါငျ (၁ဝ၃.၈၇ ကီလိုဂရမျ) ရှိတဲ့ အလိနျးဂါလာနီကလညျး ဝိတျအနညျးငယျလြော့ပွီး ရငျဆိုငျခဲ့တာပါ။
အလိနျးဂါလာနီဟာ ကဈဘောငျဆငျပှဲပေါငျး (၃၅) ပှဲထိ ကစားခဲ့ပွီး (၂၅) ပှဲအနိုငျယူခဲ့ပါတယျ။ သူ့ရဲ့အကောငျးဆုံးအခြိနျတှကေို ကဈဘောငျဆငျလောကမှာပဲ အခြိနျကုနျခဲ့သူပါ။ အဲဒီနောကျမှာ မှထေိုငျးပှဲတှေ ထိုးသတျခဲ့တာပါ။ ၂ဝ၁၃ခုနှဈရောကျမှ MMA လောကထဲ ဝငျရောကျခဲ့တာပါ။ ဘဝတဈလြှောကျလုံး ကဈဘောငျဆငျနဲ့ မှထေိုငျးလို Stand Fight တှကေိုသာ ကစားဖူးတဲ့ အလိနျးဂါလာနီဟာ ကွမျးပွငျပျေါမှာ အပူးအခြုပျကို အဓိကထားရတဲ့ Ground Fight ကိုတော့ အားနညျးမှာပါပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး အောငျလအနျဆနျဟာ ခှနျအားဗလကွီးမားပွီး Stand Fight ကောငျးတဲ့ အလိနျးဂါလာနီကို အပူးအခြုပျတှနေဲ့သာ ကစားခဲ့ပါတယျ။
Stand Fight ကောငျးတဲ့ အလိနျးဂါလာနီ (Alain Ngalani)
အောငျလအနျဆနျဟာ အမိမွမှော ဝိတျတနျးမတူတဲ့ပွိုငျဘကျနဲ့ ထိုးသတျရမှာဖွဈတဲ့ အကောငျးဆုံးပွငျဆငျလာမှနျး သိသာခဲ့ပါတယျ။ ပှဲစပွီး ၁မိနဈလောကျမှာ အလိနျးဂါလာနီဟာ အားသုံးပွီး အပျေါကနေ အပိုငျအနိုငျထိုးသတျဖို့ ကွိုးစားပမေယျ့ အောငျလအနျဆနျဟာ သူကြှမျးကငျြတဲ့ ဘရာဇီးဂြူဂဈြဆုနညျးကို အကောငျးဆုံးအသုံးခသြှားတာပါ။ ဒီအခြိနျမှာ အပျေါကဖွဈတဲ့ အလိနျးဂါလာနီဟာ အောကျကကနြတေဲ့ အောငျလအနျဆနျကို ဘာကွောငျ့အလဲမထိုးနိုငျရတာလဲလို့ မေးစရာရှိပါတယျ။ အားကစားမှာ လူကောငျကွီးတိုငျး အနိုငျယူရတာ မဟုတျပါဘူး။ လူကောငျသေးပမေယျ့ ပှဲအတှအေ့ကွုံ၊ ကိုယျလကျကွံ့ခိုငျမှုနဲ့ နညျးစနဈပေါငျးစပျလိုကျရငျ “ကွှတေဈလှညျ့ ကွကျတဈခုနျ” ပါပဲ။
အောငျလအနျဆနျဟာ အရပျအမွငျ့ ၁၈၅ စငျတီမီတာ (၆ပေ ၁လကျမ) ရှိပါတယျ။ အလိနျးဂါလာနီကတော့ ၁၈ဝ စငျတီမီတာ (၅ပေ ၁ဝလကျမ) သာရှိပါတယျ။ နှဈဦးခငျြးရငျဆိုငျထိုးတဲ့အခြိနျမှာ အလိနျးဂါလာနီရဲ့မေးဟာ အောငျလအနျဆနျရဲ့ပုခုံးလောကျမှာပဲ ရှိပါတယျ။ (ဒီအနအေထားမှာ အောငျလအနျဆနျဟာ အနညျးငယျယိုငျနတေဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။) အောငျလအနျဆနျဟာ လညျပငျးကို သခြောခြုပျပွီးတာနဲ့ ကွမျးပွငျပျေါကို လြောခလြိုကျတဲ့သဘောပါပဲ။ ဒါကို အားကစားမှာ Guillotine Choke လို့ ချေါပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ အလိနျးဂါလာနီတဈယောကျ ဘာမှမတကျနိုငျဘဲနဲ့ အသကျရှုကွပျသှားပွီး အရှုံးပေးလိုကျရတာဖွဈပါတယျ။ ဒီအခွအေနမှော (၁) မိနဈလောကျကွာသှားမယျဆိုရငျ အလိနျးဂါလာနီ သဆေုံးသှားနိုငျပါတယျ။
Guillotine Choke ပှဲသိမျးတိုကျကှကျ
ပထမအခြီမပွီးသေးခငျမှာပဲ ပှဲအဖွပေျေါသှားတဲ့အတှကျ အောငျလအနျဆနျပှဲကို စောငျ့မြှျောအားပေးရတဲ့ မွနျမာပရိသတျတှအေနနေဲ့ မခငျြ့မရဲဖွဈကွပမေယျ့ ကိုယျ့လူမြိုးအနိုငျရတဲ့အတှကျ ဖွသောနိုငျပါတယျ။ အားကစားပှဲတှမှော ကိုယျ့ဘကျက အခြိနျအကွာကွီး ကွညျ့ရမယျလို့ မြှျောလငျ့ထားပမေယျ့ အခုလို မွနျမွနျဆနျဆနျပွီးဆုံးသှားတဲ့ ပှဲတှကေလညျး အမြားကွီးပါ။ အောငျလနျအနျဆနျး အနိုငျရခဲ့တဲ့အကွောငျးတှကေတော့ ပွိုငျဘကျအားနညျးခကျြကို အသုံးခနြိုငျမှု၊ ပါးနပျမှုတှနေဲ့ မွနျမာပရိသတျအားတှကွေောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဓာတျပုံမူရငျး – One Championship
by Moethae Say . 52 mins ago
by Htet Htet . 20 hours ago